Myanmar Traditional Boxing (Lethwei) - Yangon Thu Michelle
Activities, Video Sep 21, 2018
ကစ်ဘောက်ဆင်ကို အရင်က လေ့ကျင့်ဖူးပြီးသား ဖြစ်လို့ ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ အသေးစိတ်မပြောတော့ပဲ လက်သီးတွဲလုံးတွေကို လေ့ကျင့်တာပဲ ပါတယ်။ မဆော့တာကြာတော့ သက်လုံကျတယ်။ ခဏလေးနဲ့ မောနေပြီ။
မြန်မာ့ရိုးရာလက်ဝှေ့က ပြောရရင် ပြောစရာများတယ်။ မီရှဲလဲ သက်ကိုးသက် မောင်းကိုးမောင်းလောက်ပဲ သိတယ်။ ဘာတွေလဲမေးရင် မသိသေးဘူး။ လေ့လာနေတုန်း။ ပြီးတော့ ရုပ်ပိုင်းဆုိင်ရာလေ့ကျင့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် အချိန်ပေးလေ့ကျင့်ရတယ်။ ပညာရပ်တစ်ခုကို ချစ်ဖို့့ မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့က ပညာရပ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းတွေကို လက်လှမ်းမှီမှီ လေ့လာရလွယ်ကူဖို့အရေးပါပါတယ်။ ရိုးရာလက်ဝှေ့ကို ဒီထက်ပိုုပြီး စိတ်ဝင်စားလို့လည်း လေ့လာနေဆဲပါ။ ဒါနဲ့ပတ်သတ်ပြီး စာအုပ် စာတမ်း အကြောင်းအရာသိတဲ့လူရှိရင်လည်း ကောမန့်မှာ ပြောပြပေးပါဦး …
နောက်ပိုင်းမှာလဲ မိန်းကလေးတွေ လက်ဝှေ့ကိုု ပိုပိုစိတ်ဝင်စားလာတယ်။ အမျိုးသမီးတွေ လက်ဝှေ့ထိုးတာလည်း အရင်ကထက် အားပေးလာကြတယ်။ အံသြတာမျိုးမရှိတော့ပဲ လက်ခံလာတာ တွေ့ရတယ်။ အားကစားမှာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ကဏ္ဍကအရေးပါတယ်နော့ … ။ ဒါကြောင့်လက်ဝှေ့ကို အားပေးရင်း စမ်းကစားကြည့်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော် …
IDEA LIVE Production
Special Thanks to Ko Tin Zaw Myo Ko , Sayar Thein Sann and Sayar Tinzaw Latt. Thank you RAY Kickboxing & Bodyworkshop for location.
Kickboxing, Mix Martial Art (MMA) and Muay Thai sports are famous nowadays. As I am an instructor and lead trainer of Myanmar Women Self Defense Center, I used some techniques from Myanmar Traditional Kickboxing (Lethwei).
Myanma Lethwei is considered to be one of the most brutal martial arts in the world. I’m still learning and my knowledge is still limited about this topic. I also would like to promote our country original martial arts and thats why, I would like to create this video and share from my Facebook page and YouTube channel.
In this video, my mentor Sayar Thein Sann is teaching and sharing some techniques to me. I miss Lethwei training for long time, thats make me weak the stamina.
Myanmar Traditional Kickboxing